ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “မေ့ထားတတ်တဲ့ အရာများ”
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ် လေးပါ ကိုပေါရေ၊
ဒါမျိုးလေးတွေလည်း ရေးပါဦး ကိုပေါရေ...။
ကိုပေါရေ..ဆေးရုံတက်တာ အမြတ်ထွက်လာတယ်နော်။ ဘယ်အရာမဆို ကြည့်တတ်မှ မြင်တာပါ။ နဂိုအခံလေးရှိထားလို့ပါ။
တန်ဖိုးရှိသော ဆေးရုံတက်ခြင်းပေါ့ အကိုရေ
အကိုပြောမှ ပြန်စဉ်းစားမိတယ် မသေခင်တော့ ကောင်းတာလေးတွေ လုပ်သွားဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်ဗျာ ကျေးဇူး အကိုရေ
သိတယ် .. အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်နေတာက ပိုဆိုးတာ... ဟီး
၀ိဇ္ဇာနဲ့စရဏမညီတာက အဓိက ရှော့...
နိမိတ်ကြီး ၃ ပါးလား ငါ့ညီ...
ဒီပို့ စ်အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..အမတန်မှ မှန်ကန်တဲ့ အတွေးအမြင်လေးပါ.. ဆရာတော်ကြီးတပါး ဟောထားတာနာဖူးပါတယ်.. မသာတခေါက် ကျောင်းဆယ်ခေါက် ဆိုတဲ့နေရာမှာ အသုဘပို့ တဲ့လူက သေခြင်းတရားကို ဆင်ခြင်ပြီး ငါလဲဒီလိုတနေ့ သေရမှာပါလား ငါတို့ တကယ်သေရင်မပါမယ့် အလုပ်တွေနဲ့ ပဲ အချိန်တွေကုန်နေပါလား သေခြင်းတရားကို ရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင်နိုင်မယ့် သံသရာဆင်းရဲကတကယ် လွတ်နိုင်မယ့် တရားအားထုတ်မရသေးပါလား. အမြန်ဒီကုသိုလ်တရားတွေ ပွားများအောင် ကြိုးစားမှပဲဆိုပြီး စိတ်ဖြစ်မှ သာ..ကျောင်းဆယ်ခေါက်ထက် မက တဲ့ ကုသိုလ်ဖြစ်ပါမယ်..်.. ဒီလိုမဟုတ်ပဲ.. မတွေ့ တာကြာတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့picnic ထွက်သလို စကားတပြောပြော တောင်ကြည့် မြောက်ကြည့် နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျောင်းတခေါက်သွားပြီးကုသိုလ် လုပ်သလောက်တောင် ကုသိုလ်မဖြစ်မှာတော့ အသေအချာပေါ့ဗျာ..
ဘာသာရေးစာလဲ များများရေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်..
ကြည့်စမ်း ကိုပေါ လိမ်မာလာပြီ..
ဟုတ်တယ် ကိုပေါရေ.. အဲဒီလို တွေးလိုက်ရင် အရာရာ ခွင့်လွှတ်လို့ ရသွားတယ်.. မလိမ်မိုးမလိမ်မာ ကြီးမိုက်ကြီးတွေကို တောင် သနားစိတ်ဝင်သွားတယ်. အသိဥာဏ် မရှိလို့ မိုက်နေကြတာပါလားလို့.ဆိုပြီးတော့
လူ့ဘဝဆိုတာ တကယ်တမ်း တိုတိုလေးပါ.. မကောင်းသူပယ် ကောင်းသူကယ်ချင်ပေမဲ့. သူတို့ကံက ရှိသေးတယ်လေ.. ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်တောင် မပိုင်တာ. ဆိုတော့လဲ.......ကျန်တာ ပိုဆိုးတော့မှာပေါ့..
'...ကံသာလျှင် အမိအဖ ဖြစ်၏တဲ့။...'
သားသားတို့ကျောင်းမှာ ဒီလို မသင်ရပါဘူး..
လမ်းဆုံ လမ်းထောင့်တွေက ဆိုင်းဘုတ်နီနီကြီးတွေမှာလည်း အဲ့လို မရေးထားပါဘူး..။
ဆေးရုံမှာ တရားသဘောတော်တော် ဆင်ခြင်မိသွားတယ်ထင်တယ်။ ဆေးရုံဆင်းပြီးမှ ရေးတဲ့ ပို့စ်နှစ်ခုမှာ တရားသဘော သုံးသပ်ချက်လေးတွေနဲ့။
သေချာဖတ်ပြီးမှတ်သွားပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုပေါစာကို ဖတ်မိတော့မှပဲ မေ့ချင်ချင်ဖြစ်နေတဲ့ အရာတခု ခေါင်းထဲပြန်ရောက်လာပါတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်သေရင် ကိုယ့်နောက်ပါမယ့် ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ များများပြန်လုပ်ရမယ်။ ဒါနတော့ နေ့တိုင်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ (ထမင်း၊ဟင်းပိုချက်ပြီး အိမ်က ကောင်လေးတွေကို ကျွေးတယ်လေ။:D)သီလတော့ ၅ပါးသီလကို လုံအောင်ထိမ်းဖြစ်တယ်။ ဘာဝနာအားနည်းနေတယ်။ ဘာဝနာကတော့ ညဆို ဘုရားရှိခိုးပြီးတာနဲ့ မျက်စိက မရတော့ဘူး။ မျက်စိက ဖွင့်လို့ရနေတော့လဲ စိတ်က ဘလော့ဆီရောက်နေပြီ။ :(
ကျွန်မကတော့ လူအိုတွေကိုမြင်တိုင်း ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မိတယ် ။ ပြီးတော့ လူတွေကိုလည်း အပေါ်ယံအရေပြားတစ်လွှာခွာပြီး ကြည့် ကြည့်တယ် ။ အင်း ချစ်လှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့သူတွေ ချစ်နိုင်ပါတော့မလားလို့ ။ ငါစွဲ စွဲနေတာတွေ ၊ လောဘ ဒေါသ မောဟ မာန တွေရယ်က ဘာဆို ဘာအတွက်မှ အသုံးမဝင်ပါဘူးလေ...။
ကိုယ်တွေ့တရားတွေပါလား ကိုပေါရေ... ဒီလို မမြဲခြင်းတွေရှိနေတဲ့ လောကကြီးမှာ တရားရပြီးတော့ တောထွက်မသွားပါနဲ့ဦး။ ပစ္စုပ္ပန်အတွက် လုပ်စရာတွေ ရှိပါသေးတယ်နော်။
ကိုပေါဆေးရုံတတ်တာ တော်တော်အမြတ်ထွက်သွား တယ်.. အလှူအတန်းလေးလုပ်ရင်ဖိတ်ပါဗျာ... :D